‘Uri Mukadzi Akanaka Chaizvo’—Kutenda Kwaiva naSara
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kamba Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mbunda Mizo Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tamil Tatar Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
TEVEDZERA KUTENDA KWAVO SARA
‘Uri Mukadzi Akanaka Chaizvo’
SARA akamira mumba make uye ari kutarisa zvinhu zvirimo. Ita seuri kuona mukadzi uyu wekuMiddle East ane maziso akanaka, akasvibira. Chiso chake chiri kuratidza kuti pane chiri kumunetsa here? Kana chiripo, zviri nyore kunzwisisa chiri kumunetsa. Pane zvakawanda zvakanga zvaitika muimba iyi. Iye nemurume wake, Abrahamu, * vakanga vava nemakore vachinakidzwa neupenyu ipapo. Ndiwo wakanga wava musha wavo.
Vaigara kuUri, guta rakanga rakabudirira uye raiva nevanhu vakawanda vaiita mabasa emaoko, nevamwewo vaitengesa. Saka Abrahamu naSara vaiva vanhu vakapfuma. Asi pane zvakawanda zvaiita kuti Sara ade imba yake. Iye nemurume wake vakanga vagara munzvimbo iyi kwemakore, mukufara nemukusuwa. Vaigara vachinyengetera kuna Mwari wavo, Jehovha. Zviri pachena kuti Sara aida nzvimbo iyi.
Asi akabvuma kusiya nzvimbo iyi yaainge ajaira. Kunyange zvazvo akanga ava nemakore anenge 60, akanga ava kuzoenda kune imwe nzvimbo yaaisaziva, yaityisa uye yakanga isiri nyore kurarama, asina tarisiro yekuzodzoka. Chii chakaita kuti abvume kusiya upenyu hwakanaka hwaaiva nahwo? Uye kutenda kwake kunotidzidziseiwo?
“BUDA MUNYIKA YAKO”
Sara anofanira kunge akakurira muUri. Iye zvino guta iri rangova matongo. Asi panguva yakararama Sara, zvikepe zvakawanda zvaibva kumativi mana enyika zvichitevedza Rwizi rwaYufratesi, zvichiuya kuguta iri nezvinhu zvekutengesa. Migwagwa yemuUri yaizara nevanhu, zvikepe zvaiwanda zvekuti zvimwe zvaishaya pekumira mumahombekombe erwizi uye zvitoro zvaigara zvakazara nezvinhu zvakasiyana-siyana. Saka Sara anofanira kunge aiziva vanhu vakawanda, sezvo riri iro guta raanofanira kunge akakurira. Vanhu ivavo vanofanira kunge vaimuzivawo nekuti aiva mhenya chaiyo. Hama dzake dzakawanda ndimo madzaiva.
Bhaibheri parinotaura nezvaSara, rinonyanya kutaura nezvekutenda kwake kwakakura. Akanga asinganamati mwari wemwedzi ainamatwa muUri. Muguta iri maiva nechivako chakareba chakavakirwa mwari uyu. Asi Sara ainamata Mwari wechokwadi, Jehovha. Bhaibheri haritauri kuti chii chakaita kuti azonamata Jehovha. Baba vake vaimbonamata zvidhori. Chatinoziva ndechekuti Sara akaroorwa naAbrahamu, uyo aiva mukuru kwaari nemakore 10. * (Genesisi 17:17) Nekufamba kwenguva, Abrahamu akazonzi “baba vevaya vose vanotenda.” (VaRoma 4:11) Wanano yavo yakanga yakasimba nekuti vairemekedzana, vachitaurirana vakasununguka, uye vaibatsirana kana pakamuka matambudziko. Chikuru chaivabatanidza ndechekuti vese vaida Mwari.
Sara aida murume wake chaizvo, uye vakavaka imba yavo muUri maiva nehama dzavo. Pasina kana nguva varoorana, vakaona kuti vaiva nedambudziko. Bhaibheri rinoti Sara ‘akanga asingabereki; akanga asina mwana.’ (Genesisi 11:30) Kare ikako patsika dzavo, dambudziko raSara raishoresa. Asi akaramba akavimbika kuna Mwari wake uye kumurume wake. Roti aiva mwana wemukoma waAbrahamu uye ari nherera, uye kunenge kuti vaitomutora semwana wavo. Asi nekufamba kwenguva, zvinhu zvakazongoerekana zvachinja.
Abrahamu akauya kuna Sara achifara zvisingaiti. Abrahamu akambofunga kuti zvimwe ainge ari kurota. Mwari wavainamata akanga ataura naye achishandisa ngirozi. Ita seuri kuona Sara achishamisika uye akati ndee kuna Abrahamu, achimubvunza kuti: “Kwanzi kudii? Ndiudzewo kani!” Zvimwe Abrahamu akambotanga agara pasi kuti anyatsogadzikana, achibva azomuudza zvainge zvataurwa naJehovha: “Buda munyika yako uye ubve kuhama dzako, uende kunyika yandichakuratidza.” (Mabasa 7:2, 3) Kakufara kaya pakainge kapera, vakabva vatanga kunyatsofunga zvavainge vaudzwa naJehovha. Vakanga vava kufanira kusiya upenyu hwepamusoro, votanga kunogara mumatende, vachitama-tama! Sara aizoita sei? Zviri pachena kuti Abrahamu ainyatsomutarisa achida kuona zvaaizoita. Aizozvibvuma here?
Zvakaitika kuna Sara zvinogona kutiomera kunzwisisa. Tinogona kufunga kuti, ‘Mwari haasati ambondikumbira kuti ndiite zvinhu zvakadaro!’ Ndizvo hazvo, asi pane zvimwewo zvakada kudaro zvatinonzi naMwari tiite. Tiri kurarama munyika inotikurudzira kunyanya kukoshesa zvinhu zvatiinazvo, kuda kurarama upenyu hwepamusoro uye kuunganidza zvinhu tichifunga kuti zvichazotibatsira mune ramangwana. Asi Bhaibheri rinotikurudzira kuti tiise zvinhu zvekunamata pakutanga kuti tifadze Mwari panzvimbo pekuda kuzvifadza. (Mateu 6:33) Patinofunga zvakaitwa naSara, ngatizvibvunzei kuti, ‘Zvii zvandichaitawo muupenyu hwangu?’
‘VAKABUDA MUNYIKA’ YAVAIGARA
Sara paairongedza zvinhu zvake, ainetseka kuti otora zvipi uye osiya zvipi. Aingokwanisa kutora zvinhu zvaigona kutakurwa nemadhongi kana ngamera kana zvaaizoshandisa paainge ava kugara mumatende. Zviri pachena kuti zvakawanda zvavaiva nazvo vaitofanira kuzvitengesa kana kuzvigova. Vakanga vava kusiya upenyu hwemuguta, mavaikwanisa kuenda kumisika kana kuzvitoro kuti vanotenga nyama, michero, hembe uye zvimwe zvinhu zvavaida.
Kutenda kwaSara kwakaita kuti asiye upenyu hwakanaka hwaaiva nahwo
Chimwezve chaigona kunge chakaomera Sara kwaiva kusiya imba yake. Vanochera matongo vanoti dzimwe dzimba dzaiva kuUri dzaitova nemakamuri akawanda, uye dzaiva nemvura yemupombi. Kunyange imba yemunhu ainzi haana kupfuma yaiva iri yezvidhinha, iine denga uye madhoo aiva nezvihuri. Saka kana Sara aiva neimba yakadai, chokwadi zvaigona kunge zvakaoma kuisiya. Matende aizokwanisa kumudzivirira here pambavha, uye pamhuka dzakadai seshumba, ingwe, mabheya nemhumhi dzaiwanikwa munzvimbo idzodzo?
Ko hama dzake? Ndivanaani vaaizosiya? Zvinofanira kunge zvaisava nyore kuti Sara agamuchire mashoko aMwari ekuti “buda munyika yako ubve kuhama dzako.” Mukadzi uyu aiva nerudo anogona kunge aiva nehanzvadzi, vanasisi, vanin’ina, vanamainini, vanatete, uye vanababamukuru vaakanga ava kusiya, pasina kana tarisiro yekuzovaonazve. Asi izvi hazvina kuita kuti achinje pfungwa. Akaramba achigadzirira rwendo rwavo.
Zuva rekusimuka parakasvika, Tera akaendawo naAbrahamu naSara, kunyange zvazvo akanga ava nemakore anenge 200. (Genesisi 11:31) Zviri pachena kuti Sara aizova nebasa guru rekuchengeta Tera, uyo ainge akura. Roti akaendawo navo vachibva ‘vabuda munyika yevaKadheya.’—Mabasa 7:4.
Vakafamba makiromita anenge 960 vachitevedza rwizi rwaYufratesi vakananga kuchamhembe kwakadziva kumadokero vachibva vasvika kuHarani. Vakamboti garei muHarani. Panguva iyi, Tera anenge akanga ava kurwara, saka vakambomira ipapo. Tera ndipo paakafira, ava nemakore 205. Vasati vasimudzira rwendo rwavo, Jehovha akataurazve naAbrahamu, achimuudza kuti abve munyika iyi aende kunyika yaaizomuratidza. Akamuudzazve mamwe mashoko anofadza ekuti: “Ndichaita rudzi rukuru runobva mauri.” (Genesisi 12:2-4) Pavakabva muHarani, Abrahamu akanga ava nemakore 75 uye Sara aine 65, asi vakanga vasati vava nemwana. Saka zvaizofamba sei kuti Abrahamu ave nerudzi? Aizofanira kutsvaga mumwe mudzimai here? Makore iwayo, zvakanga zvakajairika kuti varume vaite barika, saka Sara anogona kunge akafunga kuti zvimwe ndizvo zvaizoitika.
Pasinei nekuti angava akafunga zvipi, chatinoziva ndechekuti vakaenderera mberi nerwendo. Unoziva here kuti ndivanaani vakazobatana navo? Nyaya yacho inoti mhuri yaAbrahamu payakasimuka muHarani, yakabva nepfuma uye ‘nevanhu vavakanga vawana muHarani.’ (Genesisi 12:5) Vanhu ava ndevapi? Kunenge kuti vaiva vashandi vake. Abrahamu naSara vanofanira kunge vakaudzawo vanhu ava nezvaMwari wavo Jehovha. Zvimwe zvinyorwa zvechiJudha zvinoti vanhu vanotaurwa muvhesi iyi vaiva vanhu vainge vatendeuka kuti vabatane naAbrahamu naSara pakunamata Jehovha. Kana zviri izvo, kutenda kwakasimba kwaSara kwakaita kuti vanhu ava vagamuchire zvaaitaura nezvaJehovha uye zvaakavimbiswa. Tinodawo kutevedzera kutenda kwaiva naSara, nekuti tiri kurarama munyika ine vakawanda vasina kutenda kana tariro. Kana ukadzidza chimwe chinhu muBhaibheri, zvakanaka kuudzawo vamwe.
Musi waNisani 14, 1943 B.C.E. ndiwo wavanofanira kunge vakayambuka rwizi rwaYufratesi, vakabva vadzika zasi vakananga kunyika yavaiva vavimbiswa naJehovha. (Eksodho 12:40, 41) Ita seuri kuona Sara achitarisa uko nekoko achiyevedzwa nekunaka kwakaita nzvimbo iyi. Jehovha akazviratidzazve kuna Abrahamu, pedyo nemiti mikuru yeMore yaiva pedyo neShekemu, achibva ati: “Ndichapa mwana wako nyika iyi.” Shoko rekuti “mwana” rinogona kunge rakayeuchidza Abrahamu zvakaitika mumunda weEdheni, Jehovha paakati kwaizova nemwana aizoparadza Satani. Jehovha akanga audza Abrahamu kuti rudzi rwaizobva maari rwaizoita kuti vanhu vese vari panyika vakwanise kuzokomborerwa.—Genesisi 3:15; 12:2, 3, 6, 7.
Mhuri yaAbrahamu yakasanganawo nemamwe matambudziko. Munyika yeKenani makaita nzara, Abrahamu achibva aenda nemhuri yake kuIjipiti. Asi paakasvikako, akaona kuti aigona kuurayiwa. Saka akabva ati kuna Sara: “Ndapota, zvino! Ndinoziva kuti uri mukadzi [akanaka chaizvo]. Naizvozvo zvichaitika chete kuti vaIjipiti vachakuona uye vachati, ‘uyu ndiye mudzimai wake.’ Chokwadi vachandiuraya, asi iwe vachakuchengetedza uri mupenyu. Ndapota iti uri hanzvadzi yangu, kuti ndiitirwe zvakanaka nokuda kwako, uye chokwadi mweya wangu uchararama nokuda kwako.” (Genesisi 12:10-13) Nemhaka yei Abrahamu akakumbira Sara kuti aite izvi?
Vamwe vanoti Abrahamu akanga ari gwara uye akanyepa, asi handizvo. Sara akanga ari hanzvadzi yaAbrahamu zvechokwadi. Zvaityirwa naAbrahamu zvaigona kuitika. Abrahamu naSara vaiziva kuti hapana chimwe chaikosha kupfuura chinangwa chaMwari chekuti vave nemwana uye rudzi rwaizobva kuna iye Abrahamu. Saka Abrahamu aifanira kuramba ari mupenyu. Uyezve, vanochera matongo vanoti varume vekuIjipiti vaiva nezvinzvimbo vaigona kutora mukadzi wemunhu vouraya murume wacho. Saka Abrahamu akashandisa pfungwa, uye Sara akazvininipisa, ndokuteerera murume wake.
Hapana kutora nguva refu zvaityirwa naAbrahamu zvisati zvaitika. Kunyange zvazvo Sara akanga akura, machinda amambo Farao akaona runako rwake. Vakabva vaudza Farao, achibva ati vanomutora! Izvi zvinofanira kunge zvakashungurudza Abrahamu uye Sara anofanira kunge akanetsekawo. Paakasvika, Sara akabatwa semuenzi, kwete semuranda. Zvimwe Farao anga achironga kumuratidza upfumi hwake achiitira kuti amutore mwoyo. Uye zvimwe aida kuzotaura naAbrahamu waanga audzwa kuti ihanzvadzi yake, kuti akumbire kuroora Sara.—Genesisi 12:14-16.
Ita seuri kuona Sara, ari mumuzinda wamambo, muvharanda riri nechepamusoro, paimba ine nhurikidzwa, achiona zvakaita Ijipiti. Ari kunzwa sei, zvaava zvakare muimba yakavakwa nezvidhinha, ine denga uye izere nemachikichori? Akatorwa mwoyo neupenyu uhwu hwepamusoro, zvimwe hwaitopfuura hwaaiva nahwo kuUri here? Dai akafunga zvekusiya Abrahamu oroorwa naFarao, Satani aizopururudza! Asi Sara haana kuita izvozvo. Akanga akavimbika kumurume wake uye kuna Mwari wake. Munyika yatiri kurarama yazara unzenza kudai, zvingafadza chaizvo kana varume vose nemadzimai vakatevedzerawo kuvimbika kwakaratidzwa naSara! Ungatevedzerawo here Sara, wova munhu akavimbika kuvanhu vekumba kwenyu uye kushamwari dzako?
Sara aisangana nemiedzo paaigara pamba paFarao, asi akaramba akavimbika kumurume wake
Kuti adzivirire Sara, Jehovha akaita kuti Farao nemhuri yake vawirwe nematambudziko akawanda. Farao paakaziva kuti Sara aiva mudzimai waAbrahamu, akamudzosera kumurume wake achibva aita kuti mhuri yacho yose ibude muIjipiti. (Genesisi 12:17-20) Abrahamu akafara chaizvo kuti akanga avazve nemudiwa wake. Yeuka kuti akanga ambomuudza kuti: ‘Ndinoziva kuti uri mukadzi akanaka chaizvo.’ Asi ane chimwe chaaida pamudzimai wake kupfuura runako. Sara aiva mukadzi aiva neunhu hwakanaka hunofarirwa naJehovha. (1 Petro 3:1-5) Tose tinogona kushanda nesimba kuti tive neunhu hwakanaka. Kana tikaisa zvinhu zvekunamata pekutanga muupenyu hwedu, tikaedza kuudzawo vamwe zvatinoziva nezvaMwari, uye tikava vanhu vanozvibata patinosangana nemiedzo, tichakwanisa kutevedzera kutenda kwaiva naSara.
^ ndima 3 Vaimbonzi Abramu naSarai, asi vanonyanya kuzivikanwa nemazita avakazopiwa naJehovha.—Genesisi 17:5, 15.
^ ndima 8 Sara aiva hanzvadzi yaAbrahamu pakuti baba vavo vaiva Tera, asi vanaamai ndivo vakanga vakasiyana. (Genesisi 20:12) Mazuva ano hazvichaiti kuti hanzvadzi nehanzvadzi dziroorane, asi kare zvaiita. Chivi chaAdhamu naEvha chakanga chisati chadzika midzi muvanhu. Saka kare ikako, vanhu vaikwanisa kuroorana hama nehama, pasina urema hwaizoitika kuvana vavaibereka. Asi pashure pemakore anenge 400, vanhu vakanga vava kurarama makore mashoma seatava kurarama. Panguva iyoyo, Mutemo wakapiwa Mosesi wakanga wava kurambidza kuti hama dzepedyo dziroorane.—Revhitiko 18:6.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe ‘Uri Mukadzi Akanaka Chaizvo’
Mwari Anokomborera Abrahamu Nemhuri Yake